Sweden iyo Finland oo Puntland ku caawinaya adeegyo iyo khuburo caafimaad – Cod • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Sweden iyo Finland oo Puntland ku caawinaya adeegyo iyo khuburo caafimaad – Cod
Sweden iyo Finland oo Puntland ku caawinaya adeegyo iyo khuburo caafimaad – Cod
February 12, 2014 - By: Abdirizak Shiino
Agaasimaha guud ee wasaarada caafimaadka Puntland Dr. Cabdirisaaq Xirsi Xasan ayaa maanta ka warbixiyey safar uu ku tegay dalalka dibeda, shir jaraa’id oo uu ku qabtay Garoowe ayuuna ku sheegay natiijada safarkiisa.
Dr. Cabdirisaaq Xirsi xasan oo safar ku tegay qaar dalalka Yurub ayaa tilmaamay inay ka heleen balanqaadyo caafimaad dowladaha Sweden iyo finland, iyo weliba jaaliyada reer Puntland ee dalka Finland
Agaasimaha ayaa sheegay in dowladda Sweden ay Puntland ka dhisayso cisbital aad u wayn oo loogu magac darayo cisbitalka ugu wayn dalkaas, taas oo looga gol leeyahay in la mataaneeyo adeegyada caafimaad ee labada dhinac.
Docda kale, agaasimaha ayaa si gaar ah u iclaamiyey natiijada shir arrimaha caafimaadka looga hadlayey oo ka dhacay dalka Finland ayna ka qayb galeen Puntland iyo Soomaaliland, kaas oo Puntland loogu balan-qaaday 15 khuburo caafimaad ah in ay ka shaqeeyaan gudaha.
“dowladda Finland waxay ogolaatay in wasaarada caafimaadka Puntland ay ka caawido 15 xirfadle oo ka shaqaynaya cisbitalada iyo wasaarada intaba.” Agaasimaha iyo wefdigii la socday ayaa sidoo kale jaaliyada Puntland dalkaas waxay kala shireen nooca xirfadlayaasha dalka la keeni doono.
“Agaasime Cabdirisaaq Xirsi Xasan oo sheegaya shirkiisa jaraa’id ee maanta
Puntland ayaa gudbisay inay baahi badan u qabto qalabka cisbitaalada waa wayn ee gudaha, Agaasimaha ayaa kala hadlay dowladda Sweden iyo jaaliyada Puntland ee Finland in ay ka shaqeeyaan qalabaynta cisbitalada.
Dowladda Sweden ayaa sanadkii hore keentay Puntland kunteerdar ay ku jirto daawo, kaas oo qayb ka ahaa 10 kunteedhar oo dowladda Sweden ay xili hore ugu deeqday Puntland, Agaasimaha cadeeyey in qayb kale oo daawada ka mid ah sanadkan la keeno doono gobolka.